Isikhathi esining impela, ebhekisela isithonjana St Anna noma nge emthandazweni ukuba asisize nokuvikelwa, amakholwa lutho akuzona ncamashi uqinisekile ukuthi kwakubaluleke kangakanani Anna, basuke ukuzitholela ngokwabo indlela yokuxhumana. Lokhu kuholela yokuthi imithandazo lingezwakali, futhi ukholo lwabo ngemibuzo. Ake sibheke bonke abangcwele edumile enegama Anna, kanye endaweni yabo yokuvikela.
St Anne, unina Virgin
Ikhumbule oNgcwele Anna Zilungile enikelwe Disemba 22, August 7 no September 22 ekhalendeni likaGregory. Saint Anne ayeyinzalo ka-Aroni, kanye nomyeni wakhe, St uMuzi ephuma endlu yeNkosi uDavide, kusukela lapho, ngokwemfundiso yesiko lasendulo, uMesiya kwakufanele kwenzeke. Lo mbhangqwana wahlala eNazaretha, wanika ingxenye imali nyangazonke ukuze kwakhiwe ithempeli eJerusalema, kanye neminikelo abampofu.
Ngeshwa, nguNkulunkulu Esegugile benganikezwa pair of abantwana, lokho umkakho unspeakably balilile. Kuyaziwa ukuthi umndeni engenabantwana yamaJuda kukhona abangajabule neze, futhi ukungabi nenzalo ngokuthi isijeziso esindayo ezivela kuNkulunkulu. Nokho, abangcwele akazange adikibale, futhi wathandaza ngobuqotho ngenxa ukubukeka siyinzalo. Joachim bangena ehlane futhi bachitha izinsuku ezingu-40 eside, ethandazela isimangaliso, Anna futhi wasola yena ngamashwa abo, futhi wacela uJehova ukuba unike ingane yakhe, no afunge ukuze asilethe njengobufakazi isipho kuNkulunkulu.
Imithandazo owakwakhe sekuzwakala, bona wehla, ingelosi yamemezela kwentando isimangaliso. Ngakho, eJerusalema, lo mbhangqwana waba indodakazi - the Blessed Virgin Mary. Ngokusho yetinsita oNgcwele Anna Zilungile wafa ukuguga ezivuthiwe eJerusalema ngaphambi Annunciation. Isonto lokuqala elalinikezelwe saint lakhiwa Devtere futhi Assumption wakhe lugujwa Agasti 7. Imithandazo Saint Anne ukumphakamisa ukungazali, kanye uma kwenzeka yezinkinga ngesikhathi sokukhulelwa, ukuthola inzalo enempilo. Njengoba ongcwele Anna, Maria, indodakazi yakhe yaqala ukuphila ngokuzinikela kokuhlonipha uNkulunkulu, futhi waklonyeliswa injabulo ukuba azale uJesu Kristu, uMsindisi wethu.
Princess Anna Kashinskaya
Phakathi Saints Russian Anna Kashinskaya akaconsi. Kuyaziwa ukuthi bonke abakuKristu has a ubuhle ethile zazo zingase ukunikeza ethandaza abathembekile. Anna kuyimfanelo enhle sokubekezela - enye yezimfanelo ezibaluleke kunazo zonke lamaKristu, ngaphandle okuyinto akunakwenzeka ukuthuthukiswa ngokwengeziwe ngokomoya.
I share of St Anne wawisa baphakathi kosizi olukhulu. Kukho konke ukuphila kwakhe wokuzinikela kuNkulunkulu, ekugcineni ngokuba indelakazi. Ukhokho Saint Basil of Rostov, anikela ngokuphila kwawo ngenxa yokholo lwabo, ukwenqabela ukushintsha yenkolelo. ONgcwele Anna Kashinskaya wabuye waphila isikhathi lapho amaKristu ngaphansi zonke izinhlobo zoshushiso: esikhathini kwejoka zidlamlilo.
Zonke lezinkinga ezihlupha izikhonzi nokho ngehlelwe yilokhu Anna nomkhaya wakhe, nje ungabali. Konke lokhu kwaqala ukufa kayise. Khona-ke umbhoshongo Grand ngayo yonke imishini labhujiswa umlilo. Ngemva kwesikhathi esithile, umyeni ka-Ana engagula abangwe nezibi, Mikhail. Ukufa wahamba eceleni kwakhe, kodwa yathinta abashadayo izibulo - indodakazi yabo Theodora wafa isencane isakhasa. Ekugcineni, izinkinga kwamehlela Prince Michael zidlamlilo ahlukunyezwe aze afe, bezama ukuthola ukuthatha izithombe zawo.
Izilingo nosizi of Princess
Kulesi uvivinyo lokholo futhi ukubekezela kwabangcwele aziphelelanga lapho. Omunye ngemva komunye, yabulala izihlobo zayo nabantu abaseduze: kuqala, indodana yakhe endala, ababezama aphindisele kokufa kukayise, bese indodana yesibili nomzukulu abulawa phakathi ukuvukelwa Tver. Ngemva kwalokho, u-Anna watimisela kuya izindela waya esigodlweni sakhe siqu. Elapho wasebenzisa konke ukuphila ukuze umthandazo ukunqanda imiphefumulo yabathandekayo babo, kanye ukuze kukhululwe izwe Russian.
Ngo 1368, ongcwele Anna Kashinskaya wafa wangcwatshwa e lezindela kweNyuka. Kwaphela isikhathi eside ethuneni layo wasala engasenabo ukunakisisa izimpawana, kodwa amahemuhemu mayelana izimangaliso izinsalela saint safinyelela Umbhishobhi, futhi kwanqunywa ukuba uyivule. Nokho, ngemva kokufa izinkinga Anibashiyanga ongcwele, futhi ngokushesha lalibhekwa iwuphawu abasezinhlanganweni, futhi umphumela waba ukuthi kwathiwa ophucwa isimo engcwele kakhulu ngendlela 230 iminyaka. Okokuqala Cathedral of St Anne sakhiwa ngo-Petersburg ngo-1910.
ONgcwele Anne Kashinskoy ikhuleke phambi okuqakathekileko, kanye izinkinga uhlangabezana nezinkinga kanye nezilingo ezifanayo. Ukuze lomngcwabo wakhe futhi eze ngaphambi komshado futhi ngaphambi ukwamukelwa of monasticism. St Anne - nomvikeli izintandane nabafelokazi - abusise wonke umphefumulo yobuKristu, ukucela usizo.
Zilungile Ana Umprofethikazi
ONgcwele Anna Zilungile, indodakazi kaFanuweli, kwakunomuntu wesifazane we enobuhle ngokungavamile. Ukushada ekuqaleni, kodwa ephile nomyeni wakhe iminyaka engu-7, yena wasebenzisa konke ukuphila kuNkulunkulu, banamathele ngokuzila ukudla okuqinile nangokuthandaza zenza kanjalo ngokungayeki. Phakathi nokuphila kwakhe bakwazi, zinesizotha futhi ngenxa okungantengantengi ukholo saint ibilokhu ahlonishwe nge isipho ekugwemeni izingozi kusengaphambili. Kuyaphawuleka ukuthi uyilowo wesifazane kuphela okuthiwa e umprofethikazi eTestamenteni Elisha.
Lapho ngineminyaka engu-iminyaka engu-84, Saint Ana umprofethikazi kwaba ehloniphekile okufakaza uJesu elinye lamasonto onke aseJerusalema. Baby waletha ukuzinikezela kuNkulunkulu, no-Anna, kanye noSimeyoni wamemezela emtshela ukuthi unguMesiya.
Memory anikezelwe St Anne 3 no-Febhuwari 16 no-10 Septhemba. Lokhu saint kubhekwa umxhasi nomvikeli izingane. Uma ingane yakho iyagula, xhumana ne ngobuqotho ukuba isithonjana St Anne - uzobona isimangaliso. Futhi, umprofethikazi ongcwele Anna kuyasiza ukuphulukisa kusukela ukungazali, usizi nesilingo. Amantombazane azalwe naleli gama kufanele abaziphethe isithonjana saint, ukuze bazivikele ebubini nezilingo.
Church of St Anne eJerusalema
Ibandla main, anikezelwe Saint Anne, Yiqiniso, eJerusalema, ngaso leso sikhathi lapho u-Anne wabeletha uMariya. Ibandla lakhiwa 1142, kodwa oCwebileyo kahle, ngokuphambene nalokho abakulindele. Melisanda Queen asekelwe ukwakhiwa kakhulu, umuntu ongokomoya zokuxhumana umlandeli. Bernard Klervovskogo. Ngezenzo zakhe ezinhle Queen ahlonishwe ukuba angcwatshwe iSonto kweNyuka the Virgin.
Ngo 1187 the Crusaders zaxoshwa eJerusalema, futhi amasonto amaningi senihluphekile ukwa, kodwa ibandla St Anne inkani. Ngo-1856 ibandla eyanikelwa Napoleon III usizo lakhe neMpi YaseCrimea, futhi bese sidluliselwe "Obaba White" - yobuzalwane Izigodlo.
Kamuva, ibandla abuyiselwe M. Maus, ukubuyisela umoya Inkathi Crusaders. Ngo-1954, uFiliphu Cappelen, umqophi isiFulentshi, wakha i-altare main. Kuzo zombili izinhlangothi ke, kanye phezu pediment okubonisa izenzakalo ezinkulu empilweni uMariya: Isethulo ethempelini, befundisa, Annunciation nabanye. Azinake futhi Crypt komhlaba, lapho ungakwazi bavela Basilica. Kuthathwa yindawo engcwele esontweni.
Izimangaliso ziyenzeka ngisho nalapho uphuma esontweni. Budebuduze engcwele, ngasesangweni lezimvu, kukhona enye indawo emangalisayo: ichibi, lapho kanye uJesu wenza isimangaliso sokuphulukiswa. Amanzi amafonti ukuthi njengengcwele, futhi abantu abaningi abagulayo, iqondiswe esuka ethempelini, kodwa balindele lokwelashwa ngokwaphezulu lapha.
A emzaneni omncane Ukrainian Onishkovtsy njalo ukulungele ukuthola izivakashi: lapha iyona edume ukuphulukiswa entwasahlobo, eye yasiza abantu abaningi ukuqeda izifo zabo. Umthombo itholakala eduze lezindela oNgcwele Anna Zilungile, ngakho igama lakhe. Kancane kancane abasafufusa echibini elincane, unikeza ukuphulukiswa ukungazali, ngakho nabesifazane abangamakhulu ukuza St Nicholas esigodlweni, ukuze sicele isimangaliso.
Ngokwenkolelo wasendulo, echibini elingcwele Ana uvele hhayi ngaphandle kosizo lukaNkulunkulu. Okokuqala, endaweni yalo yakhiwa esontweni, elabhujiswa ngesikhathi ayehlasela AmaTatar. Ngemva kwesikhathi esithile, sase siphendukile, futhi endaweni kwaphawulwa ukubukeka umfanekiso St Anne. Isithonjana waziyisa ethempelini, kodwa ngosuku olulandelayo sathola ukuthi iyiswe endaweni nesenzakalo. Lesi simangaliso kwenzeka kaningana bengakayihlanganisi kule ndawo lakhiwa indlwana. Ngemva kwesikhathi esithile, beshaya isiphethu ongcwele.
Ezikhathini Imininingwane ukungakholelwa kuNkulunkulu isonto futhi kwabhujiswa, futhi umthombo wagcwala emhlabeni futhi ivalwe enezisekelo zikakhonkolo. Nokho, amanzi engcwele eyenziwe isendleleni, futhi abalimi base usule endaweni ukubuya echibini.
Manje, wonke echibini Yakhiwa yokubhukuda, nge amakhabethe ehlukile kwabesilisa nabesifazane. Kuyaphawuleka ukuthi izinga lokushisa kolwandle ayishintshi, kungakhathaliseki inkathi yonyaka. Ehlobo amanzi hhayi ukufuthelana ebusika ayigongobali ...
lamaGoth ekhatsi Vilnius
Lelibandla kubhekwa ngobuciko ngasekupheleni izakhiwo Gothic. Cathedral Small ubukeka ethambile ngakho futhi ezincane, edonsela eziningi ukubukwa nomdlandla ezingaphezu kuka Simi emva kwakhe iSonto enkulu St Bernard. Ubani futhi kulokho nkathi yesikhathi eyakhelwe Cathedral - it is hhayi ngokunembile eyaziwa, kodwa kubonakala siyakhazimula ngakho, ukuthi Napoleon yena yafisa ukuwuyisa eParis.
Ngubani edumile Church of St Anne ingenye izimpawu Vilnius. Uma ubheka olungaphambili lwesonto main lombhishobhi, uzothola "A" futhi incwadi "M", okungase kusho "Ave Maria" noma "u-Anna Maria Mater." Ngokusho kodokotela abathile, ukubunjwa olungaphambili lwesonto ulingisa izinsika Gediminas, iziqongo okuyizinto 3 imibhoshongo ezincane.
Ekhulwini le-19 umbhoshongo insimbi Yakhiwa eduze isonto, wabulawelwa isitayela mbumbulu Gothic. Manje oseduze nesonto ngobugebengu ipaki elihle, lapho kuhlale izivakashi emthunzini kwezihlahla noma amanga phansi etshanini, ujabulela ubuhle sesonto. Izivakashi kukhona izinkambo ekhethekile kuze kube nini nanini eyodwa nengxenye noma 3 amahora kuhlanganise iziqondiso Russian.
Church Isigodlo encane yakhiwa kuleli enkabeni yedolobha e 1321, khona-ke izikhathi eziningi elibuyiselwe kabusha. Kakade ngawo-1420, sibonga iminikelo, lezindela eSt Anne were kabili endaweni yayo yasekuqaleni. Capella Jewelers kwakhiwa bese Fugger Chapel. Kwakungesale omunye imindeni ezinethonya kunazo edolobheni futhi kwaba cishe isakhiwo sokuqala isitayela Renaissance.
Omunye ezikhangayo yiyona Museum weSonto noMartin Luther. Umlando sihlehlela emuva 1518 bakhe, lapho uLuther efika emzini ngoba zenkolo izingxoxo ne Cardinal yena. Ngenxa yalokhu umhlangano, inxusa sobupapa babehlele ukubopha umholi abashokobezi. Nokho, ngemva kokuhlangana uLuther kwesokunxele ngasese emzini. Ngo 1551 umlando omusha yethempeli, lapho kwavulwa isikole, bese sokuzivocavoca St. Anne. Ngemva kwesikhathi esithile, umakhi edolobheni, elamiswa ngokukhethekile sokuzivocavoca isakhiwo esisha ngelabhulali kanye embhoshongweni wesonto nge Spire.
Ekhulwini le-16, isonto baba umnikazi iqoqo eliyingqayizivele imidwebo kungabonwa khona kuze kube yilolu suku. Eminye imisebenzi yobuciko ephethwe ngesandla master omkhulu German Lucas Cranach uMdala. Ngokuqondene kwezobuciko ingxenye design sethempeli, kukhona okuningi ukubona ukuthi pilgrims izivakashi elula ezingahlobene ukholo lobuKristu. Okokuqala, kufanele sinake mural ophahleni, e isitayela Rococo futhi Baroque. nemidwebo eminingi stucco zibonisa izenzakalo ezinkulu ezifana Suku Ehlulelo, le Crucifixion kanye iNtshumayelo YaseNtabeni.
Yakhelwe ngokuphelele iminikelo, Jewellers yesonto wakhuliswa luhlotshiswe nemidwebo zeNkosi uHerode. Kulo mfanekiso, inkosi uphendukela Warlock ngesicelo ukuthola ukuphi likaJesu. Nemidwebo zibonisa uJesu ngokwakhe, kungenzeka ukuthi ababhula ngezinkanyezi, St Helena, uGeorge Christopher.
Athos lezindela eSt Anne
Greece ingenye yezindawo ethandwa kakhulu pilgrimage anikezelwe Saint Anne. Skit Afonsky has isithonjana ngokuyisimangaliso, ivikela omama. Kuyaziwa ukuthi izinkulungwane zabantu okwakuthi ngemva komthandazo ngaphambi kokuthi uphawu izingane kokuthola amakhono awo futhi abasiza Saint Anne. Isithonjana umi lapha izikhathi wayo wakudala othi, kufakazelwa ngesibani ubudala ne amaqanda, omi eduze isithonjana.
It kuvela ukuthi lokhu nesibani isipho prepodnos Turkish Sultan sezindela iminyaka engaphezu kuka-200 edlule! Umlando lesi sipho ithakazelisa kakhulu. Iqiniso lokuthi Sultan Limnia engenabantwana, futhi, njengoba kuphawuliwe ngaphambili, amaSulumane ukungazali like isiqalekiso wonke umndeni. Njengoba isikhathi siqhubeka, kombusi kancane kancane waguga futhi wayengeke abe nethemba ukuthola yonke inzalo. Khona-ke walizwa amahemuhemu ukuthi indlu yezindela Athos imele uphawu ngokuyisimangaliso esisiza abazali ukuthola izingane. Futhi sultan akazange anqikaze wathumela izipho ezinkulu ku-Hermitage ngesicelo yokumngenisa amanzi ongcwele namafutha kusukela izibani.
Nokho, ama-pilgrim wacabanga: "Indlela we dlulisela shrine kumuntu akazange lithi lingamaKristu," futhi wathela amafutha. Nokho, Sultan bakholwa amandla isithonjana, bese futhi yafuna kubulawa isicelo yayo ama-pilgrim. Kokuba udidekile izihambeli waya iseluleko kobaba we sezindela. "Yini okufanele siyenze? - babuza. - Uma singazi athobele ngesicelo Sultan, ehlisele nathi "bese uphendula obaba:" Khona-ke ziyise ibhotela ilila namanzi okuvamile "!.
Kwanqunywa ukuba benze kanjalo. Ukukholelwa emandleni ayisimangaliso, Sultan evamile angiphuzanga manzi kusukela emfudlaneni futhi wathandaza kakhulu, ngoba ithemba lokugcina Anna oNgcwele. Isithonjana uye wangisiza ngempela, futhi ngokushesha isimangaliso kwenzeka: Sultan wathola indodana eside elindelwe! Ezigcwele ukubonga, Sultan wathumela isibani, ehlotshiswe namatshe ayigugu. Nokho, kungakabiphi, lo amasela weba itshe, futhi Sultan ithumele e wakhe endaweni esiliva amaqanda.
Ukuze umthandazo saqina ...
Abantu abaningi, abenqabayo ukukholelwa kuNkulunkulu ngoba akayitholanga izimpendulo zemithandazo yawo. Kodwa kuthiwani uma kuba iphutha abakhulekeli ngokwabo? Iqiniso liwukuthi ngokuvamile kakhulu thina kakhulu igxile okwemihlelo yazo siqu ukuba ikhokhe intela enhloniphweni ukunakwa yobukhulu iNkosi, lapho isikhalazo. Lapho senza fixate ezidingweni zethu siqu, umthandazo wethu uba ayivumelekile. Isimo esiyinhloko impumelelo yanoma umthandazo - liyithemba e uthando namandla kaNkulunkulu, ufuna ukusisiza.
Ukuze umthandazo esenamandla, kufanele kubhekwe ekukhanyeni emseni kaNkulunkulu, khona-ke sizokwazi ukuthi anyukele ngalo futhi sithandaze izawulalelwa. Funda indlela "ukuhlangabezana" noNkulunkulu njalo ngomthandazo. Phela, thina eside ukuhlangana nabathandekayo nomndeni obathandayo, kodwa bazalwa nguNkulunkulu ngokuvamile nje ngifuna okuthile. Kodwa uNkulunkulu uthanda umdayisi. He pha umusa kulabo abakholelwa ngempela futhi ufisa ngoba ukuba khona kweNkosi ezimpilweni zabo.
On isibonelo Sultan kuyabonakala ukuthi kubalulekile inkolo womuntu ngisho ubuqotho imithandazo yakhe nezinhloso zethu. Ngakho-ke, ngisho noma "okungesona" ngobuqotho kuNkulunkulu umcele iqhaza empilweni yayo, iNkosi uyosabela emithandazweni yakhe.
St Michael Monastery: incazelo, umlando, umklamo, nemidwebo kanye yamatshe
Inkolo ngokunqoba kwamaGreki asendulo: kuyini lokho?
Amathiphu ambalwa sendlela angcwelise efulethini
Indlela esiphatha ngayo varicose emithanjeni. imisebe ye-laser we varicose emithanjeni: ukubuyekezwa, intengo
Indlela yokuwuthola a amasayithi avinjiwe? amasayithi Negative eRussia
"Baltschug Kempinski" (hotel), eMoscow: ikheli, izithombe kanye nokubuyekeza
Isinkwa e umshini isinkwa French. French isinkwa recipe for umshini isinkwa
Bangaki eMoscow iziteshi kaMasipala? Ngaphansi iziteshi ukwakhiwa ongaphansi komhlaba e Moscow
Umuthi 'losartan': yokusetshenziswa
Christopher Robin - ungubani?
Hockey umdlali Dzhastin Azevedo. Biography, kwezemidlalo, empilweni yakho